अन्तरवार्ता – Setosurya
हेर्नुहोस् पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्माको दमदार अन्तरवार्ता (भिडियो सहित)
शुक्रबार १२, असोज २०७५
संघियता कार्यान्वयन कसरी हुदैछ ? पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मासँगको बहस, संघियता कार्यान्वयन कसरी हुदैछ ? पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मासँगको बहस https://youtu.be/Lfiw5hcEuC8
कञ्चनपुर घटनाबारे निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टको यस्तो प्रतिक्रीया
बुधबार १३, भदौ २०७५
कञ्चनपुर घटनाबारे निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टको यस्तो प्रतिक्रीया : मंगलबार – साँझ सम्पर्कमा आएका निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसँगको संक्षिप्त संवाद आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।। निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा दोषी पत्ता लगाउनेभन्दा पनि निर्दोषलाई…
झलनाथ खनाल भन्छन् – पार्टी भित्रबाट ठाडो अन्याय भयो, लडाइँ जारी छ !
एमाले–माओवादी एकतासँग जोडिएका दुईवटा विषयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई बेला–बेला झस्काउँछ । पहिलो घटना– एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा उनी चीनमा थिए । त्यसैले पार्टी घोषणा समारोहमा सहभागी हुन पाएनन् । एकता…
अभियोग – १ भौतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ठुल्ठूला पर्खाल छन् । तर, एमाले नेता–कार्यकर्ता भन्छन्– कंक्रिटका ती पर्खालभन्दा जब्बर विष्णु रिमालको पर्खाल छ, जसले प्रधानमन्त्री र कार्यकर्ताको दूरी अस्वाभाविक रूपमा बढाउँदै छ । साथीहरूले सल्लाहकारको समूह र…
आइतबार १७, असार २०७५
एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई स्पष्ट वक्ता हुन् । एमाले माओवादी केन्द्रवीच हुन गइरहेको पार्टी एकताका सम्बन्धमा पार्टी सचिव भट्टराई के भन्छन् ? प्रस्तुत छ, भट्टराइसँगकाे अन्तर्वार्ता – १. पार्टी एकता घोषणा भोली…
झलनाथले लगाए केपी र माधवलाई यस्तो आरोप भन्छन्- अब प्रतिकार गर्छु
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा हुँदै गर्दा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कतै देखा परेनन्। ‘यो दिन पार्टी एकता हुन्छ’ भन्ने कुनै जानकारी नपाएका नेता खनाल पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)…
बामदेव गौतमले भने – केपी र मैले संगै रक्सी खायौ र रोयौ, माधबसंग…………
३ जेठमा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्व घटकहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताका एक सूत्रधार हुन्, पार्टीको शक्तिशाली ९ सदस्यीय सचिवालयका सदस्य बामदेब गौतम। उनी एकताअघि एमालेको बरिष्ठ उपाध्यक्षका अलावा एकताका लागि गठित…
काठमाडौं । वैशाख ९ गते पार्टी एकता टर्ने निश्चित भएपछि माओवादी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एमालेभित्रै कुरा निमलेकाले एकीकरण लम्बिएको ब्रिफिङ गरे । अझ अघि बढेर माओवादी नेताहरुले नाम उल्लेख नगर्न भन्दै माधव नेपालले माओवादीलाई…
हेर्नुहोस् मन्त्री मात्रिका यादबको सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ता : भन्छन् – गडबड गर्नेलाई ठेगान लगाउँछु !
माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री हुनासाथ धेरैले एलडीओलाई शौचालयमा थुनेको सम्झिए । उनको यो कामलाई कतिले पदीय मर्यादा विपरितको काम भने त कतिले मन्त्रीको ‘एक्सन’ माने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बाझाबाझ गर्दै राजीनामा दिने…
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनको यो अन्र्तवार्ता हामीले भर्खरै सार्वजनिक ओलीको व्यक्तिगत वेभसाइटबाट लिएका हौं । प्रस्तुत छ उनीसँग लिइएको अन्र्तवार्ताको एक अंशः जतिबेला नेपालीहरु आफ्नो…